Nagu saabsan - Baoding Jizhong Pharmaceutical Group
Iyada oo ah shirkad ka socota kooxda dawooyinka ee Jizhong, Hebei Teamtop Pharmaceutical Co., Ltd waxay inta badan ku hawlantahay suuqgeynta dibedda iyo ganacsiga caalamiga ah ee dhammaan badeecada ay soo saartay kooxdu.
Waxaa la aasaasay 1992, Kooxda Daawada Daawada ee Jizhong waxay hogaaminaysay daawada xoolahastry in ka badan 27 sano. Annaga oo ah soo-saareyaasha daawada digaagga ugu weyn iyo soo-saareyaasha dawooyinka xoolaha 3-aad ee ugu sarreysa Shiinaha, waxaan nahay shirkad heer-sare ah oo heer caalami ah iyo sumcad caan ku ah warshadaha. Waxaan inta badan soo saareynaa Albendazole Bolus, Albendazole Suspension, Enrofloxacin Injection, Oxytetracycline Injection, Ivermectin Injection, GMP daawada & xoolaha iyo iwm ...
Iyada oo leh 6 saldhig oo wax soo saar leh oo GMP ah, 14 aqoon isweydaarsi iyo 26 khadad wax soo saar, Kooxda ayaa soo saartay badeecooyin kala duwan oo caan ka ah dhammaan Shiinaha iyo suuqyada dibedda. Ilaa iyo hadda waxaan dhisnay dariiq ballaadhan, heerar badan iyo macaamiil shaqeynaya oo daboolaya 4000 ganacsato daacad u ah, 60000 dhaqameed dhaqameedyo, 2500 beero waaweyn oo taranta ah iyo 56 kooxaha taranka ah, waxaan sameyneynaa xiriir iskaashi leh 90% shirkadaha waaweyn ee taranka Shiinaha iyo u dhoofinta South America, Koonfur-bari Aasiya, Afrika iyo Bariga Dhexe.
2014, Xarunta Dhirta ee Shiinaha ee Xarunta Injineerinka & Teknolojiyada Isticmaalka Xayawaanka ee Gobolka Hebei ayaa la oggolaaday.
2013, Baoding Jizhong Biological Technology Co., Ltd waxay bilawday inay dhisto.
2012, Hebei Teamtop Pharmaceutical Co., Ltd waxaa la aasaasay oo la hawlgaliyay. Tianjin Haowei Biological Technology Co., Ltd ayaa bilaabay dhismaha.
Sanadkii 2011, Xarunta Shijiazhuang Kiimikada ayaa la aasaasey oo la hawlgaliyay.
2009, Tianxiang Bayoolaji & Farmashiyaha Co., Ltd iyo Sunlight Herb Co., Ltd waxay u gudbiyeen kormeerka & aqbalaada Wasaaradda Beeraha.
Sanadkii 2008, Xarunta Cilmi baarista ee Beijing Jiucaotang waxaa la aasaasay.
2007, waxaa la aasaasey Waaxda Ganacsiga Caalamiga ah ee Jizhong.
2006, 5 aqoon isweydaarsi iyo 7 khadad wax soo saar ayaa la kulmay heerar GMP firfircoon.
2003, Jizhong wuxuu noqday shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha ka dhacda ee gudbisay GMP (static) oo aad u ballaaran.
1993, Jizhong Pharmaceutical Co., Ltd ayaa la saaray wax soo saar.
1992, Jizhong Pharmaceutical Co., Ltd waa la diiwaangeliyay waxayna bilaabeen dhismaha.
Waxaan sii wadi doonnaa hogaaminta warshadaha, waxaa naga go'an inaan daba-galno "bulshada oo aad loo amaano, oo aad loo ixtiraamo dhigooda iyo shaqaalaha", oo aan sameyn doonno dadaallo si aan u noqonno shirkad koox xirfadeed ballaaran leh oo caan ku ah sumcadda, sumcadda iyo daacadda, ilaalinta warshadaha taranka casriga ah.